Apple Inoburitsa watchOS 3.1.1 beta uye tvOS 10.1 beta 2 yevagadziri | Ndinobva mac
Apple inoburitsa watchOS 3.1.1 beta uye tvOS 10.1 beta 2 yevagadziri
Muvhuro masikati muSpain akazadzwa nemabeta vhezheni evanogadzira uye panguva ino iyo yakamirira mangwana ndiyo vhezheni yeMac, macOS Sierra. Dzimwe shanduro iOS 10.2 Beta 2, tvOS 10.1 Beta 2, uye watchOS 3.1.1 Beta 2 vaburitswa nhasi. Parizvino, kana iwe uri musimudziri wepamutemo kana iwe uri muchirongwa cheApple chebeta, mavhezheni matsva anofanirwa kunge atooneka kunge aisa, saka tarisa mumasetingi nekuti mavhezheni matsva atove patafura.
Iyo nyowani vhezheni yeApple Watch inowedzera mashoma ekuvandudza achienzaniswa neshanduro yapfuura kana izvozvi hapana chinoonekwa kunze kweiyo chaiwo bug fixes uye madiki bug bug fixes yeshanduro yapfuura. Iyi watchOS 3.1.1 beta vhezheni inowedzera kuti kana kuenderana nemasikirwo akaitwa mushanduro yeIOS 10.2 zvekuti padiki padiki denderedzwa rakavharwa.
Munyaya ye tvOS 10.1 beta 2 kuvandudza kune zvimwe zvinonakidza zvisinei nekuwedzera mabug fixes uye madiki bug fixes sezvainoitwa iyo "chete kusaina-pa" iyo inobvumira vanogadzira kuti vawane zvese zvavakabata kuburikidza nemushandisi. Panguva ino sarudzo iyi inongowanikwa kune vashandisi muUnited States.
Saka isu tatova nekamwe kakatenderera kemushanduri inogadziridza pane izvi zvishandiso uye netariro mangwana kutendeuka kweMac ine beta yayo ye macOS SierraKunyangwe iyo nyowani vhezheni inogona kuwedzera mashoma shanduko kunze kwekugadzirisa bug uye kunetsekana pamusoro pechazvino vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa watchOS 3.1.1 beta uye tvOS 10.1 beta 2 yevagadziri
New basa kunyorera Apple Spain nePortugal
Bhuku idzva paPstrong neMabasa. Kuna Pstrong uye Beyond: Rwendo Rangu Rusingafungidzike naSteve Jobs kugadzira nhoroondo yevaraidzo